3 Matanho Ekutanga Bhizinesi Vhidhiyo Kushambadzira Campaign | Martech Zone
Vhidhiyo kushambadzira iri musimba rakazara uye vashambadzi vanoshandisa chikuva vachakohwa mibairo. Kubva pachinzvimbo paYouTube neGoogle kuwana yako tarisiro inotarisirwa kuburikidza neFacebook vhidhiyo kushambadzira, zvemukati zvemavhidhiyo zvinokwira kumusoro kwenyaya yekufedhwa nekukurumidza kupfuura marshmallow mucocoa.
Saka unoshandisa sei iwe uno unozivikanwa asi wakaomesesa svikiro?
Ndeipi nhanho yekutanga mukugadzira zvemukati zvemavhidhiyo zviri kuita kune vateereri vako?
At Vadivelu Comedy Videospot, isu tanga tichigadzira nekushambadzira vhidhiyo yevanamuzvinabhizimusi, mabhizinesi, uye zvigadzirwa kubvira 2011. Ini pachezvangu ndakashanda pakurarama kuri uye vhidhiyo mishandirapamwe yemakosi emabhizimusi epamusoro uye mashoma mashoma mazita mukushambadzira midhiya yenhau.
Isu tinoziva zvinoshanda, uye isu tine metric yekuzviratidza.
Henry Ford akachinja indasitiri paakatanga gungano rekugadzira mota. Ndiyo nzira imwechete yatinotora nevhidhiyo: apo nhanho imwe neimwe inoteedzana yekuita inokuswededza padyo nechigadzirwa chinobudirira chevhidhiyo. Nhanho yekutanga mune iyoyo maitiro ndeyekuvandudza zvemukati.
Kutanga neChirongwa Chekugadzira
Kunyangwe usati watenga kamera inodhura ine selfie stick, vatengesi vanofanirwa kutanga vagadzira fomati (mazita nemisoro) kutenderedza uko kwako kwekutanga vhidhiyo mushandirapamwe. Isu tinodaidza ichi chako chirongwa chehurongwa.
Isu tinoshandisa matatu-tiered maitiro ekuvandudza chirongwa chehurongwa icho chinozadzisa matatu makuru mabhizimusi zvinangwa kwauri:
Isa mavhidhiyo ako pa peji imwe yemhinduro dzekutsvaga.
Gadzira poindi-yako-yekutarisa se izwi rine chiremera.
Dhiraivha traffic kune peji rako rekumhara kana chiitiko chekushandurwa.
Kunyange vhidhiyo yega yega ichifanirwa kuve nechinangwa chekutanga, iyo P3 Yemukati Chekuita haingokubatsire chete mukugadzira mazita evhidhiyo ayo anozokwezva mutariri wako wekutanga asi kutevedzera fomati iyi zvakare kuchakubatsira iwe kuronga zvirimo zvemavhidhiyo ako kuti utungamire yako vaoni kutora matanho akakodzera.
Iyo P3 Yemukati Sarudzo
Dhonza Zvemukati (Hutsanana): Izvi zvirimo zvinokwevera muoni wako mukati. Aya mavhidhiyo anofanira kupindura mibvunzo iyo vateereri vako vari kubvunza zuva nezuva. Aya mavhidhiyo anogona kutsanangura mazwi kana dzidziso zvakare. Kazhinji kutaura, izvi ndizvo zvako zvinogara zvakasvibira zvemukati.
Push Zvemukati (Hub): Aya mavhidhiyo anotarisisa zvakanyanya pane yako mhando uye hunhu hwako. Neiyi nzira, chiteshi chako chinoshanda sevlogging chiteshi uko UNOSarudza pane izvo muoni achaona kana kunzwa. Mune mamwe mazwi, iwe unodzora ajenda, uye chiteshi chako chinova "hub" yezvinyorwa zvine chekuita neindasitiri yako.
Pow Zvemukati (Gamba): Aya ndiwo mavhidhiyo ako makuru ebhajeti. Ivo vanofanirwa kugadzirwa kushoma kazhinji uye kushanda mushe kana uchibatanidzwa nezviitiko zvikuru kana Mahoridhe ayo ako indasitiri anopemberera. Semuenzaniso, kana iwe uine chiteshi cheVakadzi, saka kugadzira vhidhiyo hombe yeZuva raAmai kunogona kukushandira zvakanaka. Kana iwe ukagadzira mavhidhiyo evatambi kana indasitiri yemitambo, iyo Super Bowl inogona kunge iri nguva yekugadzira vhidhiyo yepamusoro.
Saina kuOwen's Youtube Kudzidziswa Nhasi!
Tags: videospotYouTubeyoutube kushambadzirayoutube kushambadzira mushandirapamwe
Owen Hemsath inyanzvi yeYouTube uye Anopona neCancer. Mutungamiri we Vadivelu Comedy Videospot, Owen akavaka bhizinesi repasirese kubva pane yakapusa YouTube mugero. Iye anoremekedzwa-nyanzvi pamisoro ine chekuita neYouTube, Facebook vhidhiyo kushambadzira, webhusaiti dhizaini, uye vhidhiyo kushambadzira.